Mootummaan Liibiyaa fi Hidhattoonni Jeneraal Khaliifa Haftaariin hogganaman marii araaraa jalqabuuf akka tahe gabaafame - NuuralHudaa
Lola mootummaa Liibiyaa beekkamtii UN qabuu fi hidhattoota Jeneraal Khaliifaa Haftaariin hogganaman, kanneen waraana biyyoolessa Liibiyaa jechuun of moggaasan jiddutti adeemaa jiru dhaabsisuuf, Jarman Magaalaa Barliin keessatti mariin guddaan kan karoorfame tahuun beekamee jira. Haaluma kanaan Muummichi Ministeeraa Liibiyaa Faayiz Al-Sarraaji fi Jeneraal Khaliifaa Haftaar, akkasumas hoggantoonni biyyoota hedduu marii Alhada har’aa jalqabamu irratti hirmaachuuf gara Berliin seenaa jiran.
Hoggantoota biyyoota biroo maricha irratti hirmaatuu Jarman seenan jidduu, Prezdaantii Turkiyaa Rajab Xayyib Erdogaan, Prezdaantii Raashiyaa Vladimir Putin, Prezdaantii Farasaay Emanuel Macron, muummicha ministeera Briteen Boris Johnson fi ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo keessatti argamu.
Haaluma wal fakkaatuun marii deeggarsa UN fi mootummaa Jarmaniitiin qophaahe kana irratti Masri, Aljeeriyaa, Emreets, Chaayinaa fi Kongoo DRC’n kan affeeraman yoo tahu, Gamtaan Afrikaa, Gamtaan Aworooppaa fi Gamtaan biyyoota Arabaatis ni hirmaatu jedhamee eeggama.
Biyyoonni gara garaa ammoo faallaa walii dhaabbachuun deeggarsi hidhattootaaf kennaa jiran haala Liibiyaa wal xaxaa kan godhe tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Sa’uudii, Emreets, Masri, Raashiyaa fi Faransaay Jeneraal Haftaar kan deeggaraa jiran yoo tahu, Qaxar fi Turkiyaan ammoo mootummaa beekamtii UN qabu deeggaran.